I-Hip South Philly Gem 3, iMins ukusuka kuTreyini/Yonke indawo - I-Airbnb
I-Hip South Philly Gem 3, iMins ukusuka kuTreyini/Yonke indawo
Igumbi lakho lokulala e i-townhouse sinombuki zindwendwe onguNatalia And Steve
Eli ligumbi lokulala elinomnyango otshixwayo kwindlu entle enembali yaseSouth Philly. Phakathi nendawo, kukho iindawo eziyi-1.5 ukusuka kwisitrato esiyi-Broad Street Line.
Le ndlu ihonjiswe ngemibalabala, inefenitshala etofotofo, iisilingi eziphezulu, iifestile ezinkulu ezininzi nokukhanya kwemvelo, kunye nazo zonke izinto zale mihla zekhitshi negumbi lokuhlambela nelokuhlamba impahla. Indawo yokuhlala emnandi netofotofo, enomfutho omhle, indawo entle yokubuka uPhilly!
Eli likhaya elinomtsalane laseMzantsi Philly elakhiwe ngendlela enembali yendlu. Izinto zangaphakathi zonke ziindawo ezintle kakhulu, ezinemigangatho eqinileyo, iisilingi ezinkulu neefestile ezinkulu kwigumbi ngalinye. Siyazidla ngeendlela esizihombise ngazo onke amagumbi-yindawo yokuhlala entle netofotofo, nenomfutho omhle. Zonke iifenitshala zitofotofo kakhulu, kukho oomatrasi abatsha abanoboya be-memory foam-ngaphezu koko yindawo nje entle onokuhlala kuyo.
Ikhitshi negumbi lokuhlambela lisandul 'ukulungiswa ibe licoceke kakhulu kwaye lisebenza kakuhle, linayo yonke into oyidingayo ngexesha lokuhlala kwakho.
Kukho neencwadi ezininzi kunye neeDVs ezikhoyo, ukuba ungathanda ukuzonwabisa. Zingafumaneka kwiikhabhathi zeencwadi kwipaseji yomgangatho wesibini.
4.78 · Izimvo eziyi-167
Uza kuyithanda le ndawo. Yindawo entle kakhulu enembali eMzantsi Philly ekuthiwa yiWest Passyunk/eNewbold. Isitrato sethu sikhululeke kakhulu ibe sinobuhlobo nabantu abaziva besekhaya. Uninzi lwabamelwane luye lwahlala apha izizukulwana ngezizukulwana.
Ikwayindawo entle kakhulu yedolophu enezinto ezininzi ezimnandi onokuzenza. Kukho iibhari neevenkile zokutyela ezintle kuzo zonke iintlobo. Kukho neekhefi ezininzi ezinomtsalane kunye neevenkile ezikumgama wemizuzu nje omnye xa uhamba ngeenyawo. Kwaye yonke enye into osenokufuna ukuyenza kufutshane noPhilly.
Umbuki zindwendwe ngu- Natalia And Steve
Kukho igumbi elikumgangatho wokuqala esihlala kulo ixesha elininzi, ngaphandle kwaxa siseluhambeni. Ke siyabulela ukuba awungxoli kakhulu, ngakumbi ebusuku nakumgangatho wesibini. Sidla ngokunika iindwendwe indawo kodwa ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iingxaki esinazo-eyona ndlela ingcono kukuthumela umyalezo/imiyalezo okanye ukuza kusazisa ngazo naziphi na iingxaki ezingxamisekileyo.
Kukho igumbi elikumgangatho wokuqala esihlala kulo ixesha elininzi, ngaphandle kwaxa siseluhambeni. Ke siyabulela ukuba awungxoli kakhulu, ngakumbi ebusuku nakumgangatho wesibini.…